ပုဂံ ဘုရားတွေ ဖူးဖို့ဆိုပြီးပန်းရောင်းရင်း ပိုက်ဆံ စုနေတယ်လို့အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ရင်းကကူညီ ချင်ခဲ့တာအခုတော့ အဖွားကို ပေးကမ်း လှူ ဒါန်းကန်တော့ နိုင်ခဲ့ပါပြီ - ThutaSone
ပုဂံ ဘုရားတွေ ဖူးဖို့ဆိုပြီးပန်းရောင်းရင်း ပိုက်ဆံ စုနေတယ်လို့အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ရင်းကကူညီ ချင်ခဲ့တာအခုတော့ အဖွားကို ပေးကမ်း လှူ ဒါန်းကန်တော့ နိုင်ခဲ့ပါပြီ ။
အဖွားက အသက် ၇၅ နှစ်ရှိပြီတစ်ယောက်ထဲနေတာမို့မိဘ ၊ ဆွေမျိုးကဲ့သို့ စာနာထောက်ထားပြီး ပုဂံညောင်ဦး မှညီ ၊ အစ်ကို ၊ မောင်နှမ များမှမုံရွာ အဖွား အိမ်ထိ သွားရောက်လှူ ဒါန်းကြတာပါ ။
အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာ ။မုံရွာ မြို့ ဒေါနခြံရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သည့် အဖွား ဒေါ်ခင်ညွန့်ကို ဒီနေ့ ရွှေစေတီကျောင်း ဆရာတော်ဦးစီးပြီးကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း များ မှသွားရောက်၍ ထောက်ပံငွေ( ၃၆၅၀၀၀ ) ကျပ် နှင့် အဖွားအတွက် လိုအပ်မယ် ထင်တဲ့ ပစ္စည်လေးတွေ သွာရောက် လှူ ဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
ဆန် ( ၁အိတ်)ဆီ(၁ပိသာ)စောင်ခေါင်းအုံး/အခင်း/ပိုက်ဖျာ/ဓာတ်ဘူးဆပ် ပြာမှုန့်/ဆပ်ပြာခဲ/သွားတိုက်တံ/သွားတိုက်ဆေး
၂ ။ – ဦးကြည်စိုး+ဒေါ်ကြည်ထွေး(ရွှေပန်းထိမ်) သမီး ဇင်သွယ်ဖြိုးဆန် (၁) အိတ်ဆီ ၅ ပိသာစောင်တဘက် ၃ ထည်/အနွေးထည် ၂ထည်/လုံချည်၅ကွင်းမုန့်ငွေ (၁၀၀၀၀၀) တစ်သိန်း
၃ – ပုဂံညောင်ဦး တုတ်တုတ် ဂရု မှ၁၃၄၀၀၀ (တစ်သိန်းသုံးသောင်းလေးထောင်) ကျပ်
၄ – ဦးအောင်ခိုင်နှင့်ကုသိုလ်ရှင်သူငယ်ချင်းများမှ၁၃၆၀၀၀ (တစ်သိန်းသုံးသောင်း‌ခြောက်ထောင်) နှင့်ငါး‌ခြောက်/ ကြက်ဥ/ပုန်းရည်ကြီး ၊ အိုဗာတင်းမုန့် တို့ လှူ ဒါန်းခဲ့ကြပါသည် ။
ကုသိုလ်ရှင်အားလုံးဒီထက်မက အလှူ ဒါန ပြုနိုင်ကြပါစေ.
ကိုယ် ‘စိတ် စီးပွား သုံးပါးမကျန်ချမ်းသာခြင်း သုခ နှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ပြည့်နေသော အိုးများကိုရေဖြည့်ခြင်းထက် ၊ရေမရှိသော အိုးများကို ရေဖြည့်ခြင်းကပို၍ ဖြစ်သင့်သည်ဟုကျွန်တော်တို့ ထင်မှတ်မိပါ၏..
အသက် ၇၅ နှစ်ရှိ ၊တစ်ယောက်ထဲနေပြီးမပြည့်စုံသော အဖွားကိုဆန် ( ၈ ) လ စာလောက်နဲ့ငွေ ၃၆၅၀၀၀ ကျပ် နှင့် ပစ္စည်းတော်တော်များများ လှူ ဒါန်းနိုင်ခဲ့လို့ဆရာတော် နှင့် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အားလုံး အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာကြည်နူးမိတယ် ။
အဖွား အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ..နေကောင်း ကျန်းမာပြီးတရားဘာဝနာတွေ ပွားများ အားထုတ်နိုင်ပါစေ….
Aung Khaing 09.789713547
ပုဂံ ဘုရားတှေ ဖူးဖို့ဆိုပွီးပနျးရောငျးရငျး ပိုကျဆံ စုနတေယျလို့အှနျးလိုငျးပျေါမှာ တှရေ့ငျးကကူညီ ခငျြခဲ့တာအခုတော့ အဖှားကို ပေးကမျး လှူ ဒါနျးကနျတော့ နိုငျခဲ့ပါပွီ ။
အဖှားက အသကျ ၇၅ နှဈရှိပွီတဈယောကျထဲနတောမို့မိဘ ၊ ဆှမြေိုးကဲ့သို့ စာနာထောကျထားပွီး ပုဂံညောငျဦး မှညီ ၊ အဈကို ၊ မောငျနှမ မြားမှမုံရှာ အဖှား အိမျထိ သှားရောကျလှူ ဒါနျးကွတာပါ ။
အတိုငျးမသိ ဝမျးသာမိပါတယျခငျဗြာ ။မုံရှာ မွို့ ဒေါနခွံရပျကှကျတှငျနထေိုငျသညျ့ အဖှား ဒျေါခငျညှနျ့ကို ဒီနေ့ ရှစေတေီကြောငျး ဆရာတျောဦးစီးပွီးကနြျောတို့ သူငယျခငျြး မြား မှသှားရောကျ၍ ထောကျပံငှေ( ၃၆၅၀၀၀ ) ကပျြ နှငျ့ အဖှားအတှကျ လိုအပျမယျ ထငျတဲ့ ပစ်စညျလေးတှေ သှာရောကျ လှူ ဒါနျးခဲ့ကွပါသညျ။
ဆနျ ( ၁အိတျ)ဆီ(၁ပိသာ)စောငျခေါငျးအုံး/အခငျး/ပိုကျဖြာ/ဓာတျဘူးဆပျ ပွာမှုနျ့/ဆပျပွာခဲ/သှားတိုကျတံ/သှားတိုကျဆေး
၂ ။ – ဦးကွညျစိုး+ဒျေါကွညျထှေး(ရှပေနျးထိမျ) သမီး ဇငျသှယျဖွိုးဆနျ (၁) အိတျဆီ ၅ ပိသာစောငျတဘကျ ၃ ထညျ/အနှေးထညျ ၂ထညျ/လုံခညျြ၅ကှငျးမုနျ့ငှေ (၁၀၀၀၀၀) တဈသိနျး
၄ – ဦးအောငျခိုငျနှငျ့ကုသိုလျရှငျသူငယျခငျြးမြားမှ၁၃၆၀၀၀ (တဈသိနျးသုံးသောငျး‌ခွောကျထောငျ) နှငျ့ငါး‌ခွောကျ/ ကွကျဥ/ပုနျးရညျကွီး ၊ အိုဗာတငျးမုနျ့ တို့ လှူ ဒါနျးခဲ့ကွပါသညျ ။
ကုသိုလျရှငျအားလုံးဒီထကျမက အလှူ ဒါန ပွုနိုငျကွပါစေ.
ကိုယျ ‘စိတျ စီးပှား သုံးပါးမကနျြခမျြးသာခွငျး သုခ နှငျ့ပွညျ့စုံကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
ပွညျ့နသေော အိုးမြားကိုရဖွေညျ့ခွငျးထကျ ၊ရမေရှိသော အိုးမြားကို ရဖွေညျ့ခွငျးကပို၍ ဖွဈသငျ့သညျဟုကြှနျတျောတို့ ထငျမှတျမိပါ၏..
အသကျ ၇၅ နှဈရှိ ၊တဈယောကျထဲနပွေီးမပွညျ့စုံသော အဖှားကိုဆနျ ( ၈ ) လ စာလောကျနဲ့ငှေ ၃၆၅၀၀၀ ကပျြ နှငျ့ ပစ်စညျးတျောတျောမြားမြား လှူ ဒါနျးနိုငျခဲ့လို့ဆရာတျော နှငျ့ ကြှနျတျောတို့ အဖှဲ့အားလုံး အတိုငျးမသိ ဝမျးသာကွညျနူးမိတယျ ။
အဖှား အစစအရာရာ အဆငျပွပေါစေ..နကေောငျး ကနျြးမာပွီးတရားဘာဝနာတှေ ပှားမြား အားထုတျနိုငျပါစေ….